अर्घाखाँचीमा कांग्रेस जिल्ला उप-सभापति, सचिव, सहसचिव पदमा यि भए विजयी (सम्पूर्ण विजयीको विवरण सहित)
सन्धिखर्क, अर्घाखाँची (अर्घाखाँचीडट्कम) । नेपाली कांग्रेस अर्घाखाँचीको जिल्ला उपसभापति पदमा विष्णुप्रसाद भुसाल , बाबुराम पाैडेेल, सचिव कृष्णप्रसाद खनाल, अच्युत गाैतम, सहसचिव कमल पाैडेल र मेघराज पाण्डे विजयी भएका छन् ।
बिहिवार बिहान ०३:५६ बजे सम्पन्न मत परिणाम अनुसार जिल्ला उपसभापति पदमा विष्णुप्रसाद भुसाल , बाबुराम पाैडेेल, सचिव कृष्णप्रसाद खनाल, अच्युत गाैतम, सहसचिव कमल पाैडेल र मेघराज पाण्डे विजयी भएका हुन् ।
जिल्ला सदस्यमा सुर्य प्रसाद भुसाल , हरि दमासे ,बाबुराम गैरे, बिष्णु प्रसाद पौडेल , जिवा पौडेल ,गोपाल प्रसाद भुसाल, लिलाराम गौतमलाल बहादुर थापा ,बालकृष्ण श्रेष्ठ, खुमराज घिमिरे,हरि प्रसाद खनाल ,यमराज पाण्डे, मालता खनाल, मतदानबाट निर्बाचित भएका हुन भने निर्बिरोध हुनेमा लक्ष्मि बिक ,बसिर मिया, डिल बहादुर रायमाझी, कुशुम थापा, कमला पाण्डे, मिना बस्याल ,यमकला थापा,सुरेन्द्रराज पोख्ररेल , मधु पन्थी, बालकृष्ण पौडेल,राधा पाण्डे बिष्णु कुमार श्रेष्ठ , अबिना आचार्य निर्बिरोध निर्वाचित भएका छन् । नेपाली कांग्रेसको जिल्लाकार्यसमितिमा केहि ब्यक्ति बाहेक अधिकास एकपटकपनि नबसेका ब्यक्ति आएका छन् ।
यस अघि जिल्लामा नेपाली कांग्रेसको सम्पन्न १४ औं महाधिवेशनको निर्वाचनबाट सभापति पदमा केशव श्रेष्ठ विजयी भएका थिए ।
श्रेष्ठले ७३१ मत प्राप्त गरेका छन् । भने प्रतिस्पर्धी इन्द्रमणि पाैडेलले ३५२ मत प्राप्त गरेका छन् । साथै यादव प्रसाद घिमिरेले ३०९ मत प्राप्त गरेका छन् । २७ मत बदर भएको छ ।
मंगलवार राती ९ बजे शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न निर्वाचनमा १४३८ मध्ये १४२१ मत खसेको थियो । र ११ बजेपछि मतगणना शुरु भएको थियो । निवर्तमान सभापति समेत रहेका सभापतिका दावेदार बिष्णुप्रसाद खनाल (मुस्कान)ले उम्मेदवारी फिर्ता गरि केन्द्रिय महाधिवेशनमा उम्मेदारी दर्ता गरेपछि महासमिती सदस्य केशब श्रेष्ठ, नेपाल शिक्षक संघका जिल्ला अध्यक्ष यादव घिमिरे र महाधिवेशन प्रतिनिधी ईन्द्रमणी पौडेलले सभापतिको पदमा भिडेका थिए । श्रेष्ठ, ईन्द्रमणी रामचन्द्र पाैडेल पक्षिय मानिन्छन्, भने घिमिरे शेर बहादुर देउवा पक्षिय मानिन्छन् ।
शेरबहादुर देउवापक्षीय केन्द्रीय सदस्यद्वय पुष्पा भुसाल, मानबहादुर विश्वकर्मालगायतले घिमिरेलाई उम्मेदवार बनाएका थिए । श्रेष्ठलाई पौडेल पक्षका शीर्ष नेताको समर्थन रहेको थियो । श्रेष्ठले सबैसँग सहकार्य गरेरै पाटीलाई एकढिक्का बनाएर लैजाने बताए । कांग्रेसलाई स्थानीय तहदेखि आमनिर्वाचनमा जित्ने गरी संगठन निर्माणको काम गर्ने श्रेष्ठको दाबी छ । यस्तै उपसभापति पदमा ४ जना,सचिवमा ४ जना,सहसचिवमा ५ जना,जिल्ला सदस्यमा ५१ जना,केन्द्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधिमा ८८ जनाले मनोनन दर्ता गरेका थिए ।
उता कांग्रेसको यस अगाडि म‌सिर ३ गते शुक्रवार क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न भएको थियो। यस्तै गत भाद्र १८ गते शुक्रवार कांग्रेसको वार्ड महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो । यस्तै असोज ९ गते शनिवार नगर तथा गाउँपालिका अधिवेशन सम्पन्न भएको थियो ।
यस अघि २०७२ माघ २५ गते सोमवार कांग्रेस अर्घाखाँची जिल्ला कार्य समितीको १३ औं जिल्ला अधिवेशनबाट सभापतिमा विष्णु प्रसाद खनाल 'मुस्कान' निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । त्यो भन्दा अगाडिको १२ औ जिल्ला अधिवेशनमा बिष्णु मुस्कान कमल प्रसाद भुसालसित ४ मत अन्तरले पराजित भएका थिए । भुसालले १३ औं जिल्ला अधिवेशनमा खनाललाई समर्थन गरेका थिए । साथै उक्त बेला केन्द्रिय सदस्य मानबहादुर विश्वकर्मा, पुष्पा भुसाल, पुर्वमन्त्री ढुण्डिराज शास्त्री, रेवती प्रसाद भुसाल, नेता डा. रामबहादुर विसीले सहमतीमै सभापति सहित जिल्लाका सबै पदमा सहमती गर्नु कार्यकर्ताले दवाव दिएका थिए । सभापतिको उम्मेदवारमा दर्ता गराएका वासुदेव आचार्यलाई उपसभापति बनाउने सहमती भएपछि खनाल निर्विरोध भएका थिए । खनाललाई संस्थापनका केन्द्रिय नेता रेवती, कमल, देउवाका पुष्पा, मानबहादुर , शास्त्री, डा. विसीले समर्थन गरेका थिए ।